သားအရမ်းချစ်ရပါသော "နိုင်" ~ ဦးသားငယ်+ဒေါ်မီး
Home » youngest brother (ညီလေး) » သားအရမ်းချစ်ရပါသော "နိုင်"
♥ရေးသားပို့စ်တင်သူ ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး ♥ရက်စွဲ Wednesday, July 19, 2017 ♥မှတ်ချက်များ မရှိသေးပါ။
"Happy Birthday" ပါသားအရမ်းချစ်ရပါသော "နိုင်"
ယနေ့ကျရောက်သော ၂၈ နှစ်မွေးနေ့မှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်ရသော ဖေဖေမေမေ
ကိုကြီးကိုငယ် သားညီထွေးလေးနဲ့အတူ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် ပျှော်ရွှင်စွာ နိုင့်ရဲ့အိမ်မက်လမ်းခရီးလေးကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပြီး ထာဝရ အမြဲတမ်းပြုံးပျှော်နိုင်ပါစေလို့ သားနဲ့ ထပ်တူ ဖေဖေမေမေ ကိုကြီးကိုငယ် မိသားစုမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပြုသလိုက်ပါတယ်
မိသားစုအပေါ်မှာ အရမ်းအနစ်နာခံတဲ့ သားရဲ့အကို
မိသားစုအပေါ်မှာ အရမ်းကိုချစ်ခင်မြတ်နိူးတဲ့ အကို
ညီကိုတွေအပေါ်မှာလည်း အရမ်းချစ်တဲ့သားရဲ့ အကို
နိုင်သားဒီဟာလိုချင်တယ် ဟိုဟာလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင် မဖြစ်ဖြစ်အောင်မရရအောင်လုပ်ပေးတယ် နိုင်ကလေ သားအပေါ်မှာ ဘယ်အရာနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရတဲ့ အဖေနဲ့အမေတစ်ဖွယ်ပါပဲ....
နိုင်ဟာလေ သားကို အရမ်းကို ဟိုးးးငယ်ငယ်လေးကတည်းက အရမ်းချစ်မြတ်နိုးတယ် သားမှတ်မိသေးတယ်
ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ သားနဲ့ နိုင်အတူဆော့ရင်းသားက တစ်ခုခုအပြစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အဖေသိလို့ ဆူရင်ရိုက်ထိရင် နိုင့်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ အဖေရိုက်တဲ့ တုတ်အောက်မှာပဲ အမြဲတမ်းသားနာမှာစိုးလို့ ခံခဲ့တယ်
နောက်ကျောင်းသားအရွယ် ကျောင်းတက်တဲ့ အချိန် မူလတန်းကစပြီး သားက ၆ တန်းဖြစ်လာချိန်မှာ နိုင်က ၁၀ တန်းကိုရောက်ခဲ့ပြီ အဲ့ဒီ ၁၀ တန်းအထိ နိုင်ဆီက အဖေမေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးကို သားမုန့်ဖိုးဆိုပြီး နိုင်သားကိုပေးခဲ့တယ် နိုင် ၁၀တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တက် ကျောင်းတွေ ပြီးစီးသွားသည့်တိုင်အောင် သားက နိုင်အပေါ်ဘာမှ မကူညီပေးခဲ့တဲ့အပြင် အခုထက်ထိ နိုင်ကပဲသားကို ဒါကညီလေးအတွက်မုန့်ဖိုး လစဉ် တစ်လ ၁ သိန်းကို ပေးနေဆဲပဲ ဒီကြားထဲ နိုင်ရေ သားကို ဒီလကုန်သားကို ပိုက်ဆံ ၃သိန်း လောက်ပေးပါ ဆိုလည်း ဘာလုပ်ဖို့လဲ ဆိုတာကိုမမေးမမြန်းပဲ အင်း နိုင် ဒီလကုန်ပို့ပေးလိုက်မယ်လို့သာပြောပြီး မပေးဘူး ဆိုပြီး တစ်ခါမှ မငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးဘူး နောက်ပြီး သားအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုဆိုရင်လည်း ညီလေးအရမ်းပင်ပန်းရင် မလုပ်နဲ့နော် နိုင် ပြန်လာတဲ့အခါ နိုင်တို့ညီကိုတွေစုပြီး စီးပွားရေးတစ်ခုခု လုပ်ကြရအောင် ညီလေးအရမ်းပင်ပန်းတာတွေကို နိုင်မလိုချင်ဘူး ညီလေးက အငယ်ဆုံး အိမ်မှာအငယ်ဆုံး အဖေအမေ အနားမှာပဲနေရမှာ အခုလိုပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တ်ေကို မလုပ်သင့်ဘူး လို့ ခဏခဏပြောပြီး နိုင့်ကို ခွင့်လွတ်နော်ဆိုတဲ့ စကားသံလေးတွေက အခုထက်ထိ သားနားမှာ ကြားနေတုန်းပဲ နိုင်
သားကိုဆိုလည်း အမြဲတမ်းမျက်နှာ မငယ်အောင်ထားတယ် နောက်ပြီး သားကျန်းမာရေးမကောင်းတစ်ခုခုဖြစ်မှာ အရမ်းကိုစိုးရိမ်တယ် သားအတွက် ထိုင်းကနေ မော်လမြိုင်ဆေးရုံမှာ တုန်ကင် ကိုယူထားပေးတယ် သား ကျိူက္ခမီကနေသွားရင် ဟိုရောက်ရင် အရမ်းနောက်ကျမှာ ဆိုပြီးယူထားပေးခဲ့တယ် နိုင်ကလေသားအတွက်ဆို အမြဲတမ်းကိုယ့်အတွက်မကြည့်တဲ့ လိုတရ အကိုပါ ပဲ....
ဦးသားငယ်+ဒေါ်မီး - ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက် သာယာကုန်း (၁) ကျိုက္ခမီမြို့
"နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ"
♥ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုကမ္ဘာ♥
♥ ဖေဖေ - ဦးသားငယ်♥
♥ မေမေ - ဒေါ်မီး ♥
♥ အကိုအကြီးဆုံး - ကိုမိုးကျော်ဦး ♥
♥ အကိုအငယ်ဆုံး - ကိုမိုးဇော်ဦး ♥
♥ ကျွန်တော် - မောင်လင်းနိုင်ဦး ♥
♥ ညီလေးအငယ်ဆုံး - မောင်ညီညီထွေး ♥
အတော့်ကို ကြီးတဲ့ ကင်းမွန်ကြီးနဲ့ အကိုကြီး ဖေ့ဘွတ်
တစ်ဝမ်းကွဲ ချစ်ညီလေး ကျော်မိုးထွန်း ဖေဖေညီမအငယ်ဆုံး၏အကြီးဆုံးသား ဦးဝင်းခိုင် + ဒေါ်ငယ်ချိုမီးတို့၏ သားအကြီးဆုံး မောင်ကျော်မိုးထွန်း...
ပျော်ရွှင်စရာ ကိုငယ်တို့မိသားစု (ကိုငယ်+မငယ်+တူမလေး) အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ဖေ့ဘွတ် ...
ငယ်ငယ်တုန်းက ကံ့ကော်ပန်းတွေလိုက်ခူးခဲ့တာတွေကို သတိရမိတယ်။
အကိုကြီး Kata Mountain Inn2 တွင် မီးကြိုးနှင့်မီးလုံးအသစ်တပ်ဆင်နေပုံ 2016
All nieces (တူမလေးများအားလုံး)
elder brother (ကိုငယ်)
elder brother family (ကိုငယ်မိသားစု)
eldest brother (ကိုကြီး)
eldest brother family (ကိုကြီးမိသားစု)
youngest brother (ညီလေး)
Address: No.1 TharYarKhone Road, Quator YanAungMyae, Kyaikkami Town, Thanbyuzayat Township, Mon State
လိပ်စာ: ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်၊ သာယာကုန်း(၁)လမ်း၊ ကျိုက္ခမီမြို့၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။
29.04.2018 @ 16:00 pm
၁။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မင်္ဂလာ(၃) ပါး
၁။ အသေ၀နာစဗာလာနံ = လူမိုက်တို့ကို မဆည်းကပ်ခြင်း၊
၂။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေ၀နာ = ပညာရှိတို့ကို ဆည်းကပ်ခြင်း၊
၃။ ပူဇာစပူဇနေယျာနံ = ပူဇော်ထိုက်သူတို့အား ပူဇော်ခြင်း၊
- လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွဲလို့၊ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ၊
ပညာရှိကို အရှည်တွဲလို့၊ မှီဝဲဆည်းကပ် နည်းယူစေ၊
သုံးပါးရတနာ မိဘများနှင့်၊ ဆရာသမားကို ပူဇော်လေ၊
ချမ်းသာကိုပေး ဆက်ဆံရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊
အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၂။ နေထိုင်ရေး မင်္ဂလာ(၃)ပါး
၄။ ပတိရူပဒေသ၀ါသောစ = သင့်တင့်သောအရပ်၌ နေထိုင်ခြင်း၊
၅။ ပုဗ္ဗေစ ကတပုညတာ = ပြုခဲ့သော ကောင်းမှုရှိသောသူဖြစ်ခြင်း၊
၆။ အတ္တသမာပဏီဓိ = မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာဆောက်တည်ခြင်း၊
- ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာရဖို့၊ သင့်ရာဒေသ အမြဲနေ၊
ရှေးကတင်ကြို ပြုခဲ့ဖူးသည့်၊ ကောင်းမှု အထူး ရှိပါစေ၊
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ထိန်းလို့၊ မတိမ်းစေနဲ့ ဆောက်တည်လေ၊
ဥစ္စာကိုပေး နေထိုင်ရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊
၃။ သင်ကြားရေး မင်္ဂလာ (၄)ပါး
၇။ ဗာဟုဿစ္စ = အကြားအမြင် များသောသူဖြစ်ခြင်း၊
၈။ သိပ္ပ = လက်မှုပညာ အစရှိသော အပြစ်မရှိသော အတတ်တို့ကို တတ်ခြင်း၊
၉။ ၀ိနယောစ သုသိက္ခိတော = ကောင်းစွာသင်အပ်သော ၀ိနည်းတရားရှိခြင်း၊
၁၀။ သုဘာသိတ၀ါစာ = ကောင်းစွာဆိုခြင်း၊
တတ်ကောင်းတတ်ရာ ဟူသမျှကို၊ ကြားမြင်သုတ ရှိပါစေ၊
မှန်ကန်ယဉ်ကျေး ချိုသာအေး၊ ဆိုရေးတတ်ပါစေ၊
၄။ ပြုစုရေး မင်္ဂလာ (၃) ပါး
၁၁။ မာတာပိတု ဥပဌာန = အမိအဘတို့ကို ကောင်းစွာလုပ်ကျွေးခြင်း၊
၁၂။ ပုတ္တဒါရဿသင်္ဂဟ = သားမယားတို့အား သင်္ဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
၁၃။ အနာကုလကမ္မန္တာ = အနှောင့်အယှက်မရှိသော အမှုတို့ကိုသာပြုခြင်း၊
မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် မိဘကြွေးကို၊ ကောင်းစွာဆပ်ပေး ၀တ်ကျေကျေ၊
ကြွေးသစ်ချကာ သားနှင့်မယား၊ မြှောက်စားချီးမြှင့် ၀တ်ကုန်စေ၊
အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းနှင့်၊ အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ပါလေ၊
စည်းစိမ်ကိုပေး ပြုစုရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊
၅။ လိုက်နာကျင့်သုံးရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၁၄။ ဒါနဉ္စ = အလှူပေးခြင်း၊
၁၅။ ဓမ္မစရိယ = မြတ်သောအကျင့်တို့ကို ကျင့်ခြင်း၊
၁၆။ ဉာတကာနဉ္စသင်္ဂဟ = ဆွေးမျိုးတို့အား ထောက်ပံ့ခြင်း၊
၁၇။ အန၀ဇ္ဇာနိကမ္မာနိ = အပြစ်မရှိသော အမှုတို့ကိုပြုခြင်း၊
သုံးတန်စေတနာ ဖြူစင်လန်းလို့၊ ပေးကမ်းဝေမျှ လှုနိုင်စေ၊
ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကြံ မမိုက်မှားနဲ့၊ သုစရိုက်တရားကို ကြင့်ပါလေ၊
ဆွေမျိုးတွေကို ပြင်ပမထားနဲ့၊ သင်္ဂဟတရားနဲ့ ချီးမြှောက်လေ၊
သန့်စင်ပြစ်မျိုး လူထုကျိုး၊ သည်ပိုးဆောင်ရွက်စေ၊
၆။ ရှောင်ကြဉ်ရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၁၈။ ပါပအာရတီ = မကောင်းမှုမှ ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
၁၉။ ပါပ၀ိရတီ = မကောင်းမှုမှ အထူးရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
၂၀။ မဇ္ဇပါနသံသမော = သေရည်သေရက်ကို သောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
၂၁။ အပ္ပမာဒေါစ ဓမ္မေသု = ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၌ မမေ့မလျော့ခြင်း၊
မကောင်းမှုတွေ ဟူသမျှကို၊ မတွေ့ခင်က ရှောင်ကြဉ်လေ၊
တွေ့ကြုံလာရင် မလွန်ကြူးနဲ့၊ အထူးသဖြင့် စောင့်စည်းနေ၊
အရက်သေစာ မသောက်စားနဲ့၊ မှောက်မှားတတ်တဲ့ အရာပေ၊
လုပ်ကိုင်ပြောကြား သတိထား၊ တရားမမေ့စေ၊
၇။ စိတ်ထားရေး မင်္ဂလာ (၅) ပါး
၂၂။ ဂါရ၀ = ရိုသေထိုက်သူတို့အား ရိုသေခြင်း၊
၂၃။ နိဝါတ = မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း၊
၂၄။ သန္တုဌီ = ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း၊
၂၅။ ကတညုတ = သူပြုဖူးသော ကျေးဇူးကိုသိခြင်း၊
၂၆။ ကာလေန ဓမ္မဿဝန = သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအခါ၌ သူတော်ကောင်းတရားကို နာယူခြင်း၊
အသက်ဂုဏ်ဝါ ကိုယ့်ထက်ကြီးက၊ ဆည်းကပ်ခစား ရိုသေလေ၊
မာနတံခွန် ဂုဏ်မကြွနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ်ချ အမြဲနေ၊
လောဘအပို လိုမလိုက်နဲ့၊ ကိုယ်ထိုက်တာနဲ့ ကျေနပ်လေ၊
ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖူး သူ့ကျေးဇူး၊ အထူးသိတတ်စေ၊
ကောင်းကျိုးဆင့်ပွား မြတ်တရား၊ နာကြားမပြတ်ပေ၊
၈။ သည်းခံရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၂၇။ ခန္တီ = သည်းခံခြင်း၊
၂၈။ သောဝစဿတာ = သူတော်ကောင်းတို့ ဆုံးမအပ်သော စကားကို နာလွယ်ခြင်း၊
၂၉။ သမဏာနဉ္စ ဒဿန = ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့အား ဖူးမြင်ခြင်း၊
၃၀။ ကာလေနဓမ္မသာကစ္ဆာ = သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအခါ၌ တရားတော်ကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း၊
၀တ် စား နေထိုင် ရန်ခပ်သိမ်း၊ စိတ်ကိုချုပ်ထိန်း သည်းခံလေ၊
ကျိုးကြောင်း ပြညွှန် ဆုံးမစကားကို၊ ပြောကြားလာက နာလွယ်စေ၊
သူမြတ်ပုဂ္ဂိလ် ဟူသမျှ၊ မကြာခဏ တွေ့ဆုံလေ၊
သဘာဝတွေး မှန်ကန်ရေး၊ ဆွေးနွေး မပြတ်ပေ၊
၉။ ခြိုးခြံရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၃၁။ တပေါ = ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း၊
၃၂။ ဗြဟ္မစရိယ = မြတ်သောအကျင့်တို့ကို ကျင့်ခြင်း၊
၃၃။ အရိယသစ္စာန ဒဿန = အရိယသစ္စာတို့ကို သိမြင်ခြင်း၊
၃၄။ နိဗ္ဗာန သစ္ဆိကိရိယာ = နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရခြင်း၊
လောကီအာရုံ ဇိမ်ယစ်မူးလို့၊ အပျော်မကြူးနဲ့ ခြိုးခြံလေ၊
မေတ္တာ ဗြဟ္မစိုရ် လက်ကိုင်သုံးလို့၊ သူမြတ်ကျင်.ထုံး ယွင်းမသွေ၊
လေးပါးသစ္စာ ဥာဏ်မြင်ကြည့်လို့၊ အမှန်သိအောင် ကြိုးစားလေ၊
ဒုက္ခလွတ်ကင်း နိဗ္ဗာန်ချဉ်း၊ အလင်းပေါက်နိုင်စေ၊
၁၀။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခံ့ရေး မင်္ဂလာ (၄) ပါး
၃၅။ န ကမ္ပတိ = လောကဓံတရားတို့နှင့်တွေ့သော် တုန်လှုပ်သောစိတ်မရှိခြင်း၊
၃၆။ အသောက = လောကဓံတရားတို့နှင့်တွေ့သော် စိုးရိမ်သောစိတ် မရှိခြင်း၊
၃၇။ ၀ိရဇံ = လောကဓံတရားတို့နှင့်တွေ့သော် စိတ်၌ ရမ္မက်မရှိခြင်း၊
၃၈။ ခေမံ = လောကဓံတရားတို့နှင့်တွေ့သော် စိတ်၌ ဘေးမရှိခြင်း။
ဆင်းရဲချမ်းသာ သဘာဝ၊ တွေ့ကြုံနေကျ လူတိုင်းပေ၊
ကောင်းဆိုးနှစ်တန် အစုံတွဲလို့၊ တစ်လှဲ့စီလှည့် အမြဲနေ၊
လောကဓံကြုံ မဖြုံတမ်းပေါ့၊ မတုန်စမ်းနဲ့ စိတ်ခိုင်စေ၊
သောကကိုထိန်း ရမ္မက်သိမ်း၊ အေးငြိမ်း ချမ်းသာနေ၊
နိုင်ငံအကျိုး တို့ အကျိုး
ချစ်ခင် အပ်ပေ တို့မေမေ။
သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်လာ လူမှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ
အလေးအမြတ်ပြုရမည့် အရပ် ၆ မျက်နှာ
အရှေ့ မိဘ၊ တောင်မှာ ဆရာ၊ နောက်မှာ မယား၊ မြောက်ကား မိတ်ဆွေ၊ အောက်ခြေ ကျွန်မှတ်၊
အထက်ရပ်သံဃာ၊ မှတ်သားပါ။ ခြောက်ဖြာတံခါးပေါက်။
၅။ စောင့်လေမျိုးနွယ်၊ ၀တ်ငါးသွယ်၊ ကျင့်ဖွယ်သားတို့တာ(ကျင့်ဖွယ်သမီးတို့တာ)။
၅။ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင်၊ ၀တ်ငါးအင်၊ ဖခင်မယ်တို့တာ။
၅။ သင်တွေးအံရွတ်၊ တပည့်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။
၅။ သင့်ရာအပ်ပို့၊ ဆရာတို့၊ ကျင့်ဖို့ ၀တ်ငါးဖြာ။
၅။ မြတ်နိုးကြင်၊ ငါးအင် လင်ကျင့်ရာ။
မယားကျင့် ၀တ် ၅-ပါး
၅။ ပျင်းရိမမူ၊ ၀တ်ငါးဆူ၊ အိမ်သူကျင့်အပ်စွာ။
၅။ သစ္စာမှန်စေ၊ ၀တ်ငါးထွေ၊ ကျင့်လေ မိတ်သဟာ။
အလုပ်ရှင် (အရှင်) ကျင့်ဝတ် ၅-ပါး
၅။ အခါကိုလွှတ်၊ အလုပ်ရှင်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။
အလုပ်သမား (ကျွန်) ကျင့်ဝတ် ၅-ပါး
၅။ ကျေးဇူးမြွက်၊ ငါးချက် လုပ်သားဝတ်။
၅။ တတ်အားလှူစေ၊ ၀တ်ငါးထွေ၊ ပြုလေဒါယကာ။
၆။ မေတ္တာလည်းပြု၊ ရဟန်းမှု၊ ခြောက်ခု လွန်သေချာ။
တောင်းပန်မူကြောင့်၊ ရတုနဂိုရ်၊ ရွှန်းရွှန်းစိုသည်
နတ်ပြဟိတ်ကြောင့်၊ ရွှေစိတ်ငြင်ငြို၊ သံဝေပိုက၊
“၀ါဆိုလပြည့် ကျားမင်းနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့ရဂုံ
သွား၍၊ ငါးပါးဝဂ္ဂီစုံအညိနှင့် မဟီတစ်သောင်း
အား“၀ါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့ဝယ်၊ ကြွေ့ကြွေ့
" မိမိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနည်း "
လောကမှာ လူတွေဟာ အချင်းချင်း ဆက်ဆံနေကြတဲ့အခါမှာ
- မဟုတ်မမှန်တာတွေ ပြောတာတွေ
- ရိုင်းရိုင်းပြပြ ပြောတာတွေ
- ကျိုးကြောင်းစီလျော်မှုမရှိဘဲ ပြောတာတွေ ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။
အဲလိုစကားတွေ ကြားလာခဲ့ရင် -
မြတ်စွာဘုရားက ကျင့်စဉ်လေး ပေးထားတယ် ။
"န စေဝ မေ စိတ္တံ ဝိပရိဏတံ ဘဝိဿတိ "
- ငါ့စိတ်က အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေရဘူး လို့
- ပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်မသွားစေနဲ့ ။
- ဒေါသစိတ် မဖြစ်ပေါ်နဲ့ ။
- စိတ်ဓါတ် မပြောင်းလဲသွားစေနဲ့တဲ့ ။
- အပြောမခံရခင်က စိတ်ကတစ်မျိုး , အပြောခံရတဲ့အခါမှာ
စိတ်က တစ်မျိုး အဲဒီလို မပြောင်းလဲသွားစေနဲ့ တဲ့ ။
အပြောမခံလိုက်ရခင်က စိတ်မျိုးကို ထိန်းထားပါတဲ့ ။
မျက်နှာကြော တင်းသွားတာတို့ ၊
ဒေါသနဲ့ ပြန်ပြောမိတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
အဲဒီလို စိတ်ပြောင်းလဲမသွားအောင် ထိန်းပါ တဲ့ ။
တရားကျင့်တယ် ဆိုတာလဲ ဒါပါပဲ ။
တရားကျင့်တယ် ဆိုတာ အများက " တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်ပြီး မျက်စိကို စုံမှိတ်ထားတာ အဲဒီလိုမျိုး ထိုင်မှ တရားကျင့်တယ် , တရား အားထုတ်တယ် လို့ ထင်တယ် ။ အဲဒီလိုကျင့်တာက သမာဓိရအောင် ကျင့်တာ ခေါ်တယ် ။
ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို ပြောင်းလဲသွားတာမျိုး မဖြစ်အောင်
ထိန်းနိုင်တာကိုလည်း တရားကျင့်တယ် လို့ သတ်မှတ်နိုင်တယ် ။
ဒါကြောင့် စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးတော့ စိတ်ကလေးကို
ထိန်းသိမ်းမယ် လို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားလိုက်ပါ ။
စိတ်ကလေးကို မထိန်းနိုင်လို့ ပြောင်းသွားပြီ ဆိုရင်
ထပ်ပြီး ထိန်းလိုက်ရမှာက -
- မကောင်းတဲ့ စကားနဲ့ မတုန့်ပြန်နဲ့ ။
- ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း မတုန့်ပြန်နဲ့ တဲ့ ။
- မကြားဝံ့ မနာသာ စကားမျိုးတွေ မထွက်ပါစေနဲ့ တဲ့ ။
( ၁) စိတ်မဆိုးမိအောင် ထိန်းလိုက်ပါ ။
( ၂ ) တကယ်လို့ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ဒေါသ ဖြစ်မိရင်လဲ
မကြားဝံ့ မနာသာ စကားတွေနဲ့ မတုန့်ပြန်လိုက်ပါနဲ့ တဲ့ ။
လူက ကိုယ့်ကိုလာပြီးဆဲရင် ပြန်ပြီး ဆဲတတ်ကြတယ် ။ ဒါကြောင့် ယုတ်ယုတ်မာမာ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြန်မပြောပါနဲ့ လို့ ပြောတာ ။
ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး ။ ဒါက မျိုသိပ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ ပြောတယ် ။ တချို့က ပြောတယ် ။ မျိုသိပ်ရတာ များရင် ပေါက်ကွဲကုန်မယ် တဲ့ ။ တနည်းအားဖြင့် သည်းခံတယ် ဆိုတာ အတိုင်းအတာ ရှိတယ် ။ ဒါကြောင့် မပေါက်ကွဲအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။
( ၃ ) အဲဒီစကားလာပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို လိုလားတဲ့ စိတ်ကလေး မွေးလိုက်ပါ တဲ့ ။ ဒေါသစိတ်နဲ့ မတုံ့ပြန်ပဲ နေလိုက်ပါ ။ စိတ်ဓါတ်ကို ပြောင်းလိုက်တာနော် ။
( ၄ ) ဒီလို ပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အကျိုးကို လိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ မေတ္တာ ပို့ပေးပါ ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ပေါက်ကွဲသွားနိုင်တာကိုး ။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကိုယ့်ကို ဒီလိုမျိုး ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင် -
ပထမ - ပြောလာတဲ့သူကို စိတ်မဆိုးမိအောင် စိတ်ကို ထိန်းလိုက်ပါ ။
ဒုတိယ - ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေနဲ့ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ ။
တတိယ - အကျိုးလိုလားတဲ့ စိတ်ကလေး မေတ္တာစိတ်ကို မွေးလိုက်ပါ တဲ့ ။
ပိုပြီးခိုင်မာလာအောင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို မေတ္တာပွားများပေးလိုက်ပါ တဲ့ ။
နောက်တစ်ခုက အဲဒီလူအပေါ်ကနေ မေတ္တာစိတ်ကလေး ထားရာကနေ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ သတ္တဝါအားလုံးအပေါ်မှာ မေတ္တာ ဖြန့်ကျက်လိုက်ပါတဲ့ . . ။
လွယ်လွယ်ကူကူတော့ရမှာ မဟုတ်ပေမယ့် လေ့ကျင့်ယူကြရမယ် ။
တချို့ကပြောတယ် ။ ကိုယ်နဲ့ မတန်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမှ မေတ္တာ ထားလို့ မရဘူး တဲ့ ။ ဒါဟာ အမုန်းတရားကို အရှုံးပေးနေတာပါပဲ ။ အဲဒီလူမှာ မေတ္တာဓာတ် အလွန်အားနည်းနေလို့ပဲ ။
လူတွေရဲ့ မွေးရာပါ သန္တာန်မှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ( ၂ ) မျိုးပဲ ရှိတယ် ။ သဘာဝ( ၂ ) မျိုးမှာ ဒေါသဆိုတဲ့ အဆိုးတရားက လွှမ်းမိုးနေလို့ မေတ္တာဓါတ်တွေ အားနည်းနေတာ ဖြစ်တယ် ။
ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။ မေတ္တာဓါတ်တွေ ရလာအောင် တဖြည်းဖြည်း လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့ ။ မလေ့ကျင့်ဘဲ လာမှ မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။
တောင်တက်သမားတွေ ဆိုရင်လဲ လေ့ကျင့်ရတယ် ။
ဘောလုံးသမားတွေဆိုရင်လည်း လေ့ကျင့်ရတာပါပဲ ။
ရေကူးသမားတွေလည်း လေ့ကျင့်ရတာပဲ ။
လေ့ကျင့်ရင် စွမ်းရည် တက်လာတာပဲ။
စိတ်ကိုလည်း လေ့ကျင်ပေးရင် စွမ်းရည်တက်လာမှာပါပဲ ။
" ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ "
( မေတ္တာနှလုံး အစဉ်သုံး ၊ စာ- ၂၄- ၃၁ ) မှ အကျဉ်းအား ကောက်နုတ်ပူဇော်ပါ၏
Credit Words of Buddha
လောကဇာတ်ခုံ၊ ဤလူ့ဘုံ၌ မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့် ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူဌေး ၊ ငါပဂေးဟု ငါသွေးတက်ကြွ ၊ လူ့ဗာလတို့ များလှဖြာဖြာ ၊ အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာဘီလူး ၊ အမှောင့်ပူး၍ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ၊ ဂုဏ်ကိုဖေါ်လျက် မော်မော် မောက်မောက် ၊ ငါတစ်ယောက်သာ မိုးအောက်တလွှား ၊ရွှေကိုယ်လားဟု ထင်မှားမလွဲ ၊ သို့စဉ်စွဲလည်း ဇာတ်ပွဲပြီးက ၊ ပြည်ဖုံးချသော် သုဘရာဇာ ၊ မြေအောက်မှာပင် ဘာသာလူမျိုး ၊ ချိန်မထိုးပဲ ပုတ်သိုးခန္ဓာ ၊ မြုပ်ရရှာသည် ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း။
အဘ "အင်းဝိဇ္ဇာ" ဓါတ်စခန်း
မေမေသည် အဘအင်းဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့် အဘဘိုးမင်းခေါင်၊ အဘဘိုးဘိုးအောင်၊ အစရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှ ဓါတ်ခြုံပြီး အိမ်တွင် ဓါတ်စခန်းချထားခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကပင် ဖြစ်ပါသည်။
My Name is Mg.Lin Naing Oo.
My Parents are U Ohn Myine and Daw Htay Htay Win. There are4sons in our family who are Ko Moe Kyaw Oo (eldest son), Ko Moe Zaw Oo (elder son), Ko Nyi Nyi Htwe (youngest son) and me.
I was born in Kyaikkami Twon, Thanphyuzayat Twonship, Mon State, Myanmar.
My birth date is on 13 June 1989.
We live in No.1, Thar Yar Khone Road, Yan Aung Myay Quator, Kyaikkami Town, Thanphyuzayat Township, Mon Sate, Myanmar.
ဦးသားငယ်+ဒေါ်မီး (ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက် သာယာကုန်း (၁) ကျိုက္ခမီမြို့) ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်း